I chemical (liquid) ihange: yokusetshenziswa, ikakhulukazi, ukugeleza izinga nezinhlobo
ihange Liquid - kuba esinye isixazululo zokuthola izakhiwo obandayo. Indawo yaleli izindlela ezivamile lokukhanda. Yasibamba fixed ngenxa solidification sokuqanjwa amakhemikhali impahla ngesisekelo. Ukusebenzisa le ndlela alinikezi spacers, okhombisa engekho ukucindezeleka ukusonteka.
Lokhu entabeni isetshenziswa lokukhuphula e izinto kokuba nokuqina ongaphakeme noma ukuminyana, phakathi kwabo:
ihange Liquid iminyaka engu-20 edlule kwakubhekwa njengesenzo eseyintsha ezibizayo, futhi wasetshenziswa kuphela njengoba isilingo. Kusukela ngaleso sikhathi, isakhiwo kanye nemishini ye amahange wasondela, okwenza lolu hlobo iziqobosho eyinhloko futhi ashibhile uma usebenza ngezinto ezinzima. Kaningi, kulobu buchwepheshe sibizwa ngokuthi dowel ethe njo.
ihange Chemical kuyinto ezimbili-ingxenye resin zokwenziwa ngoba elihlangana nokulungisa imikhiqizo metal kusukela impahla isizinda. Ezimakethe isixazululo elinjalo wabonakala muva nje, kodwa ngenxa ukusebenza oluvelele ke iwine ukuqashelwa abathengi. amahange Chemical zivame kakhulu ezisetshenziswa lapho ezivamile plastic noma insimbi dowels akakwazi ukubhekana isakhiwo nokugcinwa.
ihange Liquid wathola ukusakazeka kwalo lapho esebenza:
izinto ukungena nakwamanye amazwe;
ukwakha imikhiqizo eziyize.
Ngokuphathelene nezinto ukungena nakwamanye amazwe, phakathi kwabo kufanele zabelwe ngaphezu kwalokho enwetshiwe ubumba ukhonkolo engasindi, ukhonkolo ukungena nakwamanye amazwe, sandstone namathempeli ngokhonkolo namatshe. Uma kuziwa emikhiqizweni ukwakhiwa, kulesi simo-ke kuyadingeka ukuba bakhulume zobumba ukungena nakwamanye amazwe futhi isitini.
Izinhlobonhlobo amahange ketshezi
ihange Liquid wanikela ukudayiswa ezinguqulweni ezimbili, phakathi kwawo - the ampoule futhi bafake. Okokuqala kukhona esalisekela futhi ezimbili ingxenye kwengoma. Njengoba umjovo, basuke edayiswa amashubhu kanye cartridges, kanti eyesibili yegama yabo - the capsule.
Ampoule amahange ketshezi emelelwa ingilazi isilinda, esemgwaqweni ngaphakathi resin lapho zihlatshwa emoyeni ke osemanzi. Ngaphambi kokusebenzisa leli khambi asendabeni yamba izimbobo, okuyinto ukubeka ampoule ne -polyester resin. In the isinyathelo esilandelayo kukhona screwed ku ihange ngesimo izikopelo metal. I ampoule siphukile, lapho ikhishwe inhlaka ukuthi sathatha. izingcezu ingilazi ngesikhathi esifanayo ukudlala indima ukuqinisa.
Liquid chemical ihange kungenzeka exutshwe styrene, lapho kulungiselelwa kuzoncika lokushisa namabanga impahla. Umjovo amahange asetshenziswa ngale ndlela. Isigaba sokuqala kwenziwa imbobo ukhonkolo, ingaphakathi langaphakathi okuyinto kahle bahlanza. Kube ingcina is extruded futhi ifakwe isici lokubopha. Ngo inqubo elapha Ukwakheka igcwalisa ezimbotsheni kanye semfene. Okuningi, le ndlela kufanelekile pustostroitelnyh izinto.
Ikakhulukazi ketshezi ihange HIT-RE 100 Hilti kusukela umkhiqizi
ihange Liquid "Hilty" namuhla ijabulela ithandwa enkulu phakathi abathengi. Phakathi kwezinye zezinto eziphilayo zingatholakala okudayiswayo UKUSHAYA-RE 100. Lokhu epoxy ingcina Ukwakheka senzelwe ukufakwa ukuqinisa futhi amahange injalo. Njengoba isizathu ukhonza lokwakha ingcina epoxy. Ethutha nokugcina ingxube kungaba ezingeni lokushisa ezisukela +5 ukuba +25 ° C. Ihange ingase eziqhutshwa at ibanga sasivumela ebanzi okushisa kusuka -40 kuya +70 ° C.
Njengoba omunye izinzuzo main of ihange imele akukho ingozi ngokuhlaziya. elapha ingxube enwetshiwe isikhathi sivuma ukuthi izakhi kokulungisa ngesikhathi sokufakwa. Uketshezi Hilti ihange, indlela isicelo okuzokwenziwa ashiwo ngezansi, kufanelekile ukusetshenziswa ngaphakathi nangaphandle kwezakhiwo, kanye impahla ezifundeni ezehlukene, okuyilezi:
Izindawo ukusetshenziswa kukhona ihange kuyinto:
ukukhweza izakhiwo steel;
izakhi steel kokungathembeki;
uxhumano futhi yasibamba nokufakwa concreted.
Izindleko kanye nama-liquid ikakhulukazi ihange main Hit Re 500 by Hilti umkhiqizi
Okushiwo ngenhla ihange ketshezi, ogama intengo ruble 2200. iphakethe ngalinye, ephelele ukuvuleka ukuthi une-ubukhulu umxhwele nokuphakama nokujula, futhi zazenziwa usebenzisa idayimane ubuchwepheshe. Indaba ine enokwethenjelwa futhi izinga. Umzimba womuntu ungakwazi othola umthwalo ephoqelela futhi ivumela stud kabani ubukhulu idlula i-M24.
Izingcindezi Zempilo e ukhonkolo bengekho, lokhu kunciphisa ibanga isikhungo futhi step kuze onqenqemeni. I ihange nezimo, ezosetshenziswa, ngisho izimbobo ezimanzi kungaba ne adhesion akusho yehle. Okufakiwe kuyinto itjhubhu ukonga, ngakho kwamandla akanayo ukusebenzisa lapho injected. Umthamo ukwakhiwa imfucuza kuyehla sibonga emaphaketheni esiyingqayizivele. Ukwakheka has a nephunga okubabayo, ngakho nalo ungasebenza ngisho endlini. Kufakiwe rebar nama-rod zingalawulwa sibonga umbala obomvu we ingxube.
Ukusetshenziswa okusamanzi ihange Hilti
Ukusetshenziswa sezikhonkwane chemical ngeke ifane kuye ububanzi imbobo, Ukujula kwawo futhi ububanzi we ihange. Uma ipharamitha zokugcina ilingana M8, kanye nendinganiso ukuvulwa ukujula - 80 mm, ukugcwaliswa ivolumu umgodi kuyoba 4.14 ml. Kulokhu ububanzi imbobo okulingana 10 mm. Ukusebenzisa igobolondo 300 ml, uyokwazi ukugcwalisa emgodini 72,4.
Lapho ububanzi we ihange ku-M10 kanye ukuvuleka endaweni ka-90 mm ukujula ejwayelekile uchitha 6,71 ml ukwakheka ngesikhathi ububanzi 12 mm ngalo ingaphakathi. Ukusebenzisa igobolondo 300-ml, uzokwazi ukuba bagcwalise izimbobo 44,7. Lapho ihange sifinyelela ububanzi-M30, kanye emgodini ukujula ejwayelekile ilingana 280 mm, ivolumu kokuqanjiwe ngoba umgodi kuyoba okulingana 177,71 ml. Lezi idatha ezifanelekayo umgodi ububanzi 35 mm. Ukuthola igobolondo kabani ivolumu 385 ml, ungagcwalisa izimbobo nge 2,2 izici esesikhulume ngazo.
izimbobo Drill ngaphambi kokugcwalisa kufanele kube kwelinye ngezindlela ezimbili:
ukusetshenziswa umshini nedayimani;
Ubuchwepheshe wokuqala kakhulu ayethanda, ngoba izimbobo etholakala kahle round futhi abushelelezi. Ngokuphathelene ubuchwepheshe puncher, kumelwe ezihilela ukusetshenziswa sokuzivivinya ulinganiswe. Sludge kumelwe kususwe nge futha isandla noma compressor.
Ukufakwa amahange kumele kwenziwe ngosizo imishini ekhethekile. Uma unquma ukusebenzisa iziqondiso ketshezi ihange ukusetshenziswa kwaso kufanele zihlolwe. In the isinyathelo esilandelayo kufanele kube ukusetha cwilisa nokufakwa, siphile ngokuvumelana nalo ngomzamo omncane. Kule nqubo, ebusweni bazocula esincane ingxube, okuyinto kumelwe kususwe ngaphambi solidification.
Inkosi kufanele asebenzise amagilavu ukwakhiwa kanye amagogolo. Ngemva kokufaka rebar kufanele enze wedging kuze solidification ephelele ihange kungxenye engakaze enwetshiwe bedle isisindo ayo.
Ngemva solidification sokuqanjwa kubalulekile ukuze wenze isiqiniseko sokuthi i-ihange ifakiwe kahle. Kulokhu, timphawu awayindwayo akusho uphendukisa ezansi. Okubambelela ngeke konakale kusuka ngaphandle. Uma benza lapha at okushisa aphansi, indaba isizinda kumele sekuqala ukufudumala nge ithoshi propane noma kushisa ukwakhiwa emoyeni isibhamu. Ngaphambi kokufaka pin kususwa ukugqwala.
Arbolit: amasu yokukhiqiza, ukwakheka, ngezabelo, kanye nemishini, GOST
Uphahla ibhodi lukathayela ngezandla zakho: Lokhu kwenziwa kanjani?
Izindlu skeleton: libuyekeza abaqashile, amaphrojekthi kanye nokwakhiwa
Ubukhulu ezifanele. jeans 32 Usayizi - it is a Russian?
10 izindlela unciphise umzimba ngaphandle ukuzincisha ukudla futhi yezemidlalo imithwalo
I conductivity ezishisayo of izinsimbi kanye nokusebenzisa kwayo
Biography Svetlana Kamynina - abadlali abanamakhono yaseshashalazini Russian kanye cinema
Imikhiqizo ukunciphisa igazi viscosity